Kuguma Kwechitendero Chenhema Kwava Pedyo! — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Kuguma Kwechitendero Chenhema Kwava Pedyo!
Chitendero Chenhema . . .
Chitendero Chechokwadi . . .
Mwari Anofadzwa Nemachechi Ose Here?Mugwagwa Unoenda Kuupenyu Husingaperi—Wakauwana Here?
Mashoko oUmambo Nhamba 37
Shoko Renyika Yose
▪ Chii chinonzi chitendero chenhema?
▪ Chichaguma sei?
▪ Zvichava nechokuita newe sei?
Chii Chinonzi Chitendero Chenhema?
Mhosva dzinoparwa muzita rechitendero dzinokushungurudza here? Hondo, ugandanga, uye uori hunoitwa nevaya vanoti vanoshumira Mwari zvinoita kuti unzwe kuti hapana kururamisira here? Nei zvichiita sokuti chitendero ndicho chinokonzera zvinetso zvakawanda kwazvo?
Chinetso chiri pachitendero chenhema kwete pachitendero chose zvacho. Munhu anoremekedzwa nevakawanda mune zvechitendero, Jesu Kristu, akataura kuti chitendero chenhema chinobereka mabasa akaipa, sezvinoita “muti wose wakaora unobereka chibereko chisingabatsiri.” (Mateu 7:15-17) Chitendero chenhema chinobereka zvibereko zvipi?
▪ CHINOPINDIRA MUHONDO UYE MUNE ZVEMATONGERWO ENYIKA: “MuAsia nomune dzimwe nzvimbo,” inodaro magazini inonzi Asiaweek, “vatungamiriri vanonyanyisa kuda zvinzvimbo vari kudzora maonero anoita vanhu chitendero nenzira youtsinye kuitira kuti zvivanakire ivo.” Somugumisiro, magazini yacho inonyevera kuti: “Nyika inoita seyava kupenga.” Mumwe mutungamiriri wechitendero akakurumbira wokuUnited States akazivisa kuti: “Munofanira kuuraya magandanga kuti arege kuuraya vanhu.” Akati vaifanira kuzviita sei? “Aurayei ose muzita raShe.” Kusiyana naizvozvo, Bhaibheri rinoti: “Kana munhu achitaura kuti: ‘Ndinoda Mwari,’ asi achivenga hama yake, iye murevi wenhema.” (1 Johani 4:20) Jesu akatoti: “Rambai muchida vavengi venyu.” (Mateu 5:44) Zvitendero zvingani zvaungafunga nezvazvo zvine nhengo dzinoenda kuhondo?
▪ CHINOPARADZIRA DZIDZISO DZENHEMA: Zvitendero zvakawanda zvinodzidzisa kuti mweya kana kuti mudzimu chinhu chisingaoneki chiri mumunhu chisingafi panofa muviri womunhu. Zvichishandisa dzidziso iyi, zvitendero izvi zvakawanda zvinobiridzira nhengo dzazvo, zvichichaja mari kuti zvinyengeterere mweya inenge ichinzi yaenda kudenga. Zvisinei, Bhaibheri rinodzidzisa dzidziso yakasiyana. “Mweya unotadza—ndiwo uchafa.” (Ezekieri 18:4) “Vapenyu vanoziva kuti vachazofa; asi vakafa havana kana chavanoziva.” (Muparidzi 9:5) Jesu akadzidzisa kuti vakafa vachamutswa—chinhu chaisafanira kuitwa dai mweya yevanhu isingafi. (Johani 11:11-25) Chitendero chako chinodzidzisa kuti mweya haufi here?
▪ CHINOBVUMIRA UNZENZA: Munyika dzokuMadokero, mapoka ezvitendero anogadza ngochani kuva vafundisi uye anokurudzira hurumende kuti dzibvumire kuti ngochani dziroorane. Kunyange machechi anoshora unzenza akaregerera vatungamiriri vezvitendero vakabata vana chibharo, vachiramba vari vafundisi. Zvisinei, Bhaibheri rinombodzidzisei? Rinotaura zvakajeka kuti: “Musatsauswa. Zvifeve, kana vanonamata zvidhori, kana mhombwe, kana varume vanochengeterwa kuita zvinhu zvisiri zvomusikirwo, kana varume vanorara nevarume, . . . havazogari nhaka youmambo hwaMwari.” (1 VaKorinde 6:9, 10) Unoziva here zvitendero zvinobvumira unzenza?
Ramangwana rezvitendero zvinobereka zvibereko zvakaora richange rakaita sei? Jesu akanyevera kuti: “Muti wose usingabereki chibereko chakanaka unotemerwa pasi wokandwa mumoto.” (Mateu 7:19) Chokwadi, chitendero chenhema chichatemwa choparadzwa! Asi izvi zvichaitika rini uye zvichaitika sei? Zvakaratidzwa zvouprofita zvakanyorwa mubhuku reBhaibheri raZvakazarurwa, chitsauko 17ne18, zvine mhinduro yacho.
Chitendero Chenhema Chichaguma Sei?
Imbofungidzira zviri kuitika. Hure rakagara pachikara chinotyisa. Chikara chacho chine misoro minomwe nenyanga gumi. (Zvakazarurwa 17:1-4) Hure rinomiririra ani? Rine simba “pamusoro pemadzimambo enyika.” Rinopfeka zvipfeko zvepepuru, rinoshandisa rusenzi, uye rakapfuma zvokupfuma zviya. Uyezve, ‘marudzi ose anotsauswa’ netsika yaro yokuita zvemidzimu. (Zvakazarurwa 17:18; 18:12, 13, 23) Bhaibheri rinotibatsira kuona kuti hure iri isangano rechitendero romunyika yose. Harimiririri chitendero chimwe chete, asi zvitendero zvose zvinobereka zvibereko zvakaora.
Chikara chinogarwa nehure chinofananidzira masimba enyika ezvematongerwo enyika.* (Zvakazarurwa 17:10-13) Chitendero chenhema chinogara pachikara ichi chezvematongerwo enyika, chichiedza kuva nezvachinotaura pazvisarudzo zvinoitwa nechikara uye kudzora zvachinoita.
Zvisinei, munguva pfupi iri kutevera, pane chinhu chinoshamisa chichaitika. “Nyanga gumi dzawaona, nechikara, izvi zvichavenga hure uye zvichariparadza nokuripfekenura, uye zvichadya nhengo dzaro dzine nyama uye zvichariroromesa nomoto.” (Zvakazarurwa 17:16) Nenzira inotyisa, masimba enyika ezvematongerwo enyika achangoerekana apandukira chitendero chenhema uye achachiparadza zvachose! Chii chichaita kuti adaro? Bhuku reBhaibheri raZvakazarurwa rinopindura kuti: “Mwari akaisa izvi mumwoyo mazvo kuti zviite kufunga kwake.” (Zvakazarurwa 17:17) Chokwadi, Mwari achaita kuti chitendero chenhema chizvidavirire nokuda kwezvinhu zvose zvinosemesa zvachakaita muzita rake. Achiruramisira zvakakwana, achashandisa shamwari dzacho dzezvematongerwo enyika kuti dzichiparadze.
Unofanira kuitei kana usingadi kuzoparadzwa pamwe chete nechitendero chenhema? “Budai mariri, vanhu vangu,” anokurudzira kudaro mutumwa waMwari. (Zvakazarurwa 18:4) Zvechokwadi, yava nguva yokuti titize muchitendero chenhema! Asi ungatizira kupi? Kwete kupfungwa yokuti hakuna Mwari, sezvo pfungwa iyoyowo isina tariro. (2 VaTesaronika 1:6-9) Kuchitendero chechokwadi chete ndiko kwatingatizira. Ungaziva sei kuti ichi ndicho chitendero chechokwadi?
Maziviro Aungaita Chitendero Chechokwadi
Chitendero chechokwadi chinofanira kubereka zvibereko zvipi zvakanaka?—Mateu 7:17.
▪ CHINE RUDO: Vanamati vechokwadi “havasi venyika,” havatadziswi kubatana noruvara rweganda kana kuti tsika, uye vane ‘rudo pakati pavo.’ (Johani 13:35; 17:16; Mabasa 10:34, 35) Pane kuurayana, vanoda kufirana.—1 Johani 3:16.
▪ CHINOVIMBA NESHOKO RAMWARI: Pane kudzidzisa “tsika” uye “mirayiro yevanhu sedzidziso,” chitendero chechokwadi chinotora dzidziso dzacho muShoko raMwari, Bhaibheri. (Mateu 15:6-9) Nei? Nokuti “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa zvinhu.”—2 Timoti 3:16.
▪ CHINOSIMBISA MHURI UYE CHINOKURUDZIRA TSIKA DZAKANAKA: Chitendero chechokwadi chinodzidzisa varume kuti ‘vade madzimai avo semiviri yavo,’ chinobatsira madzimai kuti ‘aremekedze varume vawo kwazvo,’ uye chinodzidzisa vana kuti ‘vateerere vabereki vavo.’ (VaEfeso 5:28, 33; 6:1) Uyezve, vaya vanotungamirira vanofanira kuva netsika dzakanaka kwazvo.—1 Timoti 3:1-10.
Pane here chitendero chinoita izvi? Bhuku rinonzi Holocaust Politics, rakabudiswa muna 2001, rinoti: “Kudai vanhu vakawanda vaitevedzera zvinoparidzwa uye zvinoitwa neZvapupu zvaJehovha, vanhu vazhinji vaisazourayiwa pamwe chete uye marudzi aisazoparadzwa.”
Zvechokwadi, munyika 235, Zvapupu zvaJehovha hazvingoparidzi zvinotaurwa neBhaibheri nezvetsika—zvinorarama zvinoenderana nezvarinotaura. Tinokukurudzira kuti ukumbire Zvapupu zvaJehovha kuti zvikubatsire kudzidza zvinodiwa naMwari kwauri kuitira kuti umunamate sezvaanoda. Zvino ndiyo nguva yokuita kudaro. Usanonoka. Kuguma kwechitendero chenhema kwava pedyo!—Zefaniya 2:2, 3.
Kana uchida mamwe mashoko nezveshoko rinobva muBhaibheri rinoparidzwa neZvapupu zvaJehovha, inzwa wakasununguka kuzvinyorera pakero iri pasi apa.
□ Ndisina zvandinovimbisa, ndinokumbirawo bhurocha rinonzi Rambai Makarinda!
□ Ndapota ndionei nezvokudzidza Bhaibheri pachena ndiri pamusha.
Kana uchida tsananguro yakadzama yezvenyaya iyi, ona bhuku rinonzi Zvakazarurwa—Mugumo Wazvo Une Mbiri Wava Pedyo! rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
[Mashoko okukwezva vaverengi ari papeji 3]
Chitendero chenhema chine simba “pamusoro pemadzimambo enyika”
“Budai mariri, vanhu vangu”
Mabhuku eChiShona (1973-2019)